आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? — Imandarmedia.com
काठमाडौँ । सोमबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार तोलामा ६ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा ७ सय रुपैयाले घटेको हो ।
आइतबार प्रतितोला ९० हजार ७ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर प्रतितोला ९० हजार रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । आज चाँदीको मूल्य १ हजार १ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
यसैबीच सरकारले एक वर्षको अवधिमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ताको माग दाबी परेको थियो । त्यसबाट आन्तरिक राजस्व विभागले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर फिर्तायोग्य रकम ठहर गरेको हो । यसमध्ये कूटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ तथा विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीको कुल ८९ करोड ९४ लाख ८८ हजार कर फिर्ता भएको छ ।
विभागको आँकडा अनुसार एक वर्षमा कुल ८५६ करदाताले कर फिर्ताको माग दाबी गरेका थिए । तीमध्ये निर्यातकर्तासहित अन्य करदाताका लागि भने २ अर्ब ९० करोड २१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ । विभागका अनुसार अघिल्लो आब ०७५/७६ को तुलनामा कर फिर्ता केही बढेको छ ।
सामान्यतया करदाताले तिर्नुपर्ने भन्दा बढी तिरेको कर परीक्षण गरी फिर्ता गरिन्छ । कर फिर्ता पाउने गरी ऐन नियमबाट तोकिएका व्यक्ति तथा संस्थाले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहतका राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ ।
कर तिर्नुपर्ने गरी दर्ता भएको बाहेक करको भार बेहोर्नु नपर्ने कुटनीतिक नियोग तथा विभिन्न ऐन-नियमबाट कर छुट प्राप्त व्यक्ति र संस्थाले किनेको वस्तु र सेवामा समेत अग्रिम तिरेको कर नियम अनुसार फिर्ता पाउने प्रावधान छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहेको बेला आव ०७४/७५ मा वनस्पती घ्यु, तेल, चिनी मैदा, कपडा र मोवाइल फोनमा व्यापारीलाई दिने भ्याट फिर्ता खारेज गरेपछि सो आवयता कर फिर्ता रकम घट्न थालेको हो ।
कुन क्षेत्रमा कति कर फिर्ता ?
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७६/०७७ मा बिभिन्न कुटनीतिक नियोग तथा कुटनीतिक एजेन्सीको कर फिर्ताका लागि ५४५ वटा दावी परेको थियो । दाबी रकम ४४ करोड १५ लाख थियो । त्यसबाट ४१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । यसमध्ये कूटनीतिक नियोग तथा कुटनीतिज्ञको दावी भने ४२९ वटा थियो ।
कुटनीतिक एजेन्सीको भने ११६ वटा दावि थियो । यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कर कार्यालयबाट लगातार क्रेडिट र निकासीका आधारमा ११७ करदाताको कर फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भई संचालित विदेशी परियोजनाहरुको कुल ३१५ दाविमा रु.५१ करोड ७५ लाख कर फिर्ता भएको थियो ।